September 28, 2019 - Page2of2- Myitter
ရဲရင့်တဲ့ မော်ဒယ် သမင်မ လေးက ပေးတဲ့ DNA သက်သေမုဒိမ်းကျူးလွန်သူ ၇ဦးထိ ဖမ်းပြီးတဲ့ ထိုင်းကနမူနာလေးပါ။
ရဲရင့်တဲ့ မော်ဒယ် သမင်မ လေးက ပေးတဲ့ DNA သက်သေ Sep 27.2019 မုဒိမ်းကျူးလွန်သူ ၇ဦးထိ ဖမ်းပြီးတဲ့ ထိုင်းကနမူနာလေးပါ။ ထိုင်းက ဖက်ရှင်မယ်သေဆုံးမူ့ ပြီးတော့ သူဖာသာအရက်မူးလွန်လို့ သေတာလို့ အိမ်ပိုင်ရှင်ပါတီပွဲ ပေးတဲ့သူတွေက ထွက်ကြတယ်။ နောက်တရက်မှာအဲဒီအိမ်မှာပါတီပွဲ တောင်ဆက်ပေးကြ သေးတယ်ဖက်ရှင်မယ်သေတာငါတို့နဲမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့ပေါ့။ သူတို […]
ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အချက် (၂) ချက်
သမီးလေးဖခင်၊ သမီးလေး ဦးလေး၊ အဒေါ် တို့ကနေ လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ကူးပြီး တရားရုံးမှာ တင်သွင်းခဲ့တာ (တရားဥပဒေနှင့်မညီ သည့် သက်သေခံချက်များကို တင်သွင်းပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ဆိုပြီးတော့) ၊ သတင်းမီဒီယာများအား တရားလိုရှေ့နေနှင့် တရားခံရှေ့နေတို့မှ ဖြေကြားခဲ့တာ၊ ဒေါက်တာ ဝင်းကိုကိုသိန်း မှလည်း ၁၄.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၉၃၀ […]
သား ထီပေါက်ရင် ကျေင်းပြန်တတ်မယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးက ရင်ကိုထိခိုက်စေတယ်ဗျာ ….
လမ်းပေါ်ကပန်းကလေး ချစ်လိုက်တာ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရင်ထီထိုးမယ် ဆိုတော့ ရိုက်ပါအန်တီ ရိုက်ပါ သားဆီမှာထီထိုးပါတဲ့….သူရွေးပေးတဲ့ ၁၀စောင်တွဲယူတော့ ဖုန်းနံပါတ်ရေးတယ် …. လက်ရေးက ခနော်ခနဲ့ ဘယ်နှတန်းအထိကျောင်းနေဖူးသတုံးဆိုတော့ ၅တန်းနဲ့ကျောင်းထွက်လိုက်ရတာ တဲ့…. တို့တိုင်းပြည်က မဖူးခင်ကြွေရတဲ့ပန်းတွေ သူထီရောင်းနေတဲ့လမ်းက စာသင်ကျောင်းနဲ့ကပ်လျက် စာသင်ခန်းထဲက စာအံသံတွေ လမ်းမကကြားနေရတယ် ကလေးရယ်….. သူလည်း ကျောင်းနေချင်ရှာမှာပဲ […]
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို ရရှိလာဦးမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ MM IDOL ပြိုင်ပွဲဝင် အေးမြဖြူ
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို ရရှိလာဦးမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ MM IDOL ပြိုင်ပွဲဝင် အေးမြဖြူ တစ်နှစ်တစ်ခါ ပရိသတ်တွေ ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲကြီးက အခုဆိုရင် Season4အထိ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ အနယ်နယ်၊ […]
“တရားဥပဒေမှာ သူခိုးက လူပြန်ဟစ်လို့ရလား” လို့ မေးလာတဲ့ မင်းမော်ကွန်း
ဒီကနေ့မှာတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့ အမှုနဲ့ပက်သတ်ပြီး သတင်းထူးတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်ကနေ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ ဖခင်၊ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ ဦးလေး၊ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ အဒေါ်၊ ဒေါ်ရွက်နုအောင်၊ ဦးခင်မောင်ဇော်၊ ဒေါက်တာဝင်းကိုကိုသိန်း( သက္ကမိုးညို) တို့ကို ဒေါ်စုဒါလီကို စွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မနဲ့ပဲ ပတ္တာရဲစခန်းမှာ […]
“ဒဏ်ရာရပြီး ရန်သူနေအိမ်မှန်းမသိဘဲ ဝင်သွားခဲ့မိတဲ့ တပ်ကြပ်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်”
“ဒဏ်ရာရပြီး ရန်သူနေအိမ်မှန်းမသိဘဲ ဝင်သွားခဲ့မိတဲ့ တပ်ကြပ်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်” ကျွန်တော်ဟာ တပ်မတော်က တပ်ကြပ်တစ်ယောက်ပါ။ ညဦးပိုင်းက ကျွန်တော်တို့ တပ်စု ကင်းလှည့်နေရင်း ရန်သူ့တပ်နဲ့ တွေ့လို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ရန်သူနဲ့ အင်အားချင်း မယှဉ်နိုင်လို့ ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးကြရတယ်။ မှောင်ထဲမှာ ဆုတ်ခွာကြရင်းနဲ့ ကျွန်တော်လည်း တပ်နဲ့ ကွဲသွားတယ်။အခု […]